Izindaba zenkampani |
WhatsApp: + 86-13511523530
Ezinye izinto zokusebenza
Ukukhiqizwa Nokulawulwa Kwekhwalithi
Umehluko phakathi kwesikele sezicubu kanye nesikere Suturing
Isikhathi seposi: 03-23-2021
Umehluko phakathi kwesikele se-Tissue kanye ne-Suturing Scissors Umehluko phakathi kwesikele sezicubu kanye nezikele zokuthunga njengokulandelayo: 1. isikele sezicubu sisetshenziselwa ukusika izicubu zomuntu, nesikele ...Funda kabanzi »
Kuthiwani Ngezinsimbi Zokuhlinza Ngama-Microsurgery?
Isikhathi seposi: 03-19-2021
Kuthiwani Ngezinsimbi Zokuhlinza Ngama-Microsurgery? Izinsimbi zeMicrosurgical zibhekisa kumathuluzi amahle akhethekile afanele odokotela ukwenza ukuhlinzwa okuningiliziwe, ukwehlukaniswa, kanye nokususwa kanye nokulungiswa kwezicubu ngaphansi kwesibonakhulu. Izinsimbi zomshini zokuhlinza ezijwayele ukusetshenziswa yilezi: 1. Ama-microsurgery forceps yiwona ...Funda kabanzi »
UKUPHATHWA KWEZINTO ZOKUPHEPHA
Isikhathi seposi: 03-16-2021
UKUPHATHWA KWEZINTO ZOKUPHEPHA. Zonke izinsimbi zamehlo zidinga ukuphathwa ngokucophelela. Amaphuzu wesikisi abucayi kakhulu; amathiphu akumele athintwe Zonke izikele, iziphathi zenaliti kanye ne-forceps enhle kudingeka ukuthi kuvikelwe amathiphu abo Abavikeli kumele bahlanganise wonke amakhaba noma ...Funda kabanzi »
Izinguquko eziyishumi ezinkulu embonini yezokwelapha yaseChina ngo-2021!
Isikhathi seposi: 03-13-2021
Izinguquko eziyishumi ezinkulu embonini yezokwelapha yaseChina ngo-2021! 1. Umshwalense wezokwelapha ungena enkathini ye-2.0 Uhlobo lwe-1.0 lomshuwalense wezokwelapha ikakhulukazi umshwalense wokuqala wezokwelapha waseChina ngonyaka we-5,000 ...Funda kabanzi »
Kuyini Ukuhlinzwa Kwepulasitiki?
Isikhathi seposi: 03-08-2021
Mayelana Nokuhlinzwa Ngeplastiki Ukuhlinzwa kwepulasitiki kuyinto ekhethekile yokuhlinzwa elungisa, yakha kabusha, futhi iguqule umzimba womuntu. Ihlukaniswe izigaba ezimbili: Ukuhlinzwa kabusha nokwakhiwa kwezimonyo. Ukuhlinzwa okwakha kabusha kufaka phakathi ukuhlinzekwa kwe-craniofacial, ukuhlinzwa ngesandla, i-microsurgery, ne-burn and sca ...Funda kabanzi »
Mayelana Nemininingwane Yokubhaliswa Kwedivayisi Yezokwelapha eChina Kusuka ku-CMDE
Isikhathi seposi: 03-05-2021
Mayelana Nemininingwane Yokubhaliswa Kwamadivayisi Wezokwelapha eChina Kusuka ku-CMDE Imininingwane Yomkhiqizo we-Class III yasekhaya, amadivayisi wezokwelapha weClass II kanye ne-Class III avunyelwe ukubhaliswa ngo-2020 Ngo-2020, i-State Food and Drug Administration ivume ingqikithi yemikhiqizo yedivayisi yezokwelapha eyi-1,572 (kufaka phakathi .. .Funda kabanzi »
Ukuhlukaniswa okuyinhloko kwesikele sokuhlinzwa
Isikhathi seposi: 03-02-2021
Ukwahlukaniswa okuyinhloko kwesikele sokuhlinza Imvamisa izikele zokuhlinza zingaphambukiswa ngezigaba eziningi ngokuya ngezindlela ezahlukanisayo zokuhlukanisa. Njengokusetshenziswa kwezitho zomzimba, kufaka phakathi ama-microsurgical sicssors, isikelo se-ophthalmic, isikele sezicubu, izikele zokuthunga, njalonjalo. Ku ...Funda kabanzi »
Kufaka ini ukuhlolwa okujwayelekile kwamehlo?
Isikhathi seposi: 01-23-2021
Kufaka ini ukuhlolwa okujwayelekile kwamehlo? Ukuhlolwa okuvamile kwe-ophthalmology kufaka: ukuhlolwa kwe-ophthalmoscope ye-fundus, ukuhlolwa kwengcindezi ye-intraocular yengcindezi ye-intraocular, isimo se-vitreous, noma ngabe kukhona ukopha kwi-retina, ukuhlolwa kwe-corneal confocal microscope examinati ...Funda kabanzi »
Ungazikhetha kanjani izinsimbi ezifanelekile zokuhlinza zokuhlinzwa?
Isikhathi Iposi: 01-11-2021
Ungazikhetha kanjani izinsimbi ezifanelekile zokuhlinza zokuhlinzwa? Usuku: 2021-01-11 Lapho isibhedlela sikhetha okokuhlinzwa, yiziphi izinto ezibalulekile okufanele bazicabangele? Ungazikhetha kanjani ezifaneleke kakhulu kufanele ...Funda kabanzi »
IHongyu Medical Ihambele Ingqungquthela Yabahlinzayo Yamathambo Ebanjelwe eDolobheni laseHangzhou
Isikhathi Iposi: 10-26-2020
IHongyu Medical Attended Orthopedic Surgeons Conference ibibanjelwe eHangzhou City 2020-10-26 Ingqungquthela ebalulekile futhi edumile yokuhlinza epulasitiki ibibanjelwe eXihu, Hangzhou, China, kusukela ngomhlaka 20 ~ 24, 2020. UMongameli waseHongMedical uMnu Chen neMenenja babe khona emhlanganweni njengabamele i-manufactu yethu ...Funda kabanzi »
Umkhosi Wenjabulo Emaphakathi Nosuku Nosuku Lukazwelonke
Isikhathi Iposi: 09-27-2020
Umkhosi we-Happy Mid Autumn kanye noSuku Lukazwelonke lweHongyu Medical lunifisela inhlanhla, uMkhosi Waphakathi Nokwindla Nosuku Lukazwelonke uyajabula! UMkhosi wethu Waphakathi Ekwindla Nosuku Lukazwelonke selusondele futhi sizoba neholide lokugubha. Sicela waziswe ngomusa ukuthi iholide lethu lihlelelwe ukuthi libe ...Funda kabanzi »
Hongyu Medical Ukuhambela Umbukiso Obalulekile Wezepulasitiki
Isikhathi Iposi: 06-23-2020
Izindaba Mayelana Nosuku Lomkhankaso Wezokwelapha: 2020-06-23 Hongyu Medical wayehambele imibukiso yezokwelapha epulasitiki ebalulekile, eyayiseJiNan City, eSifundazweni saseShandong. Kwenze impumelelo enkulu. -Hongyu MedicalFunda kabanzi »
12 Okulandelayo> >> Ikhasi 1/2
Ngemibuzo mayelana nokubuyekezwa kwethu, sicela ushiye i-imeyili yakho kithi futhi sizothintana namahora angama-24.
FAKA: 46 Dukangqiao Road, Chengdong, Huai 'An District, Huai' An Idolobha, Isifundazwe Jiangsu, China
Ucingo: + 86-13511523530